एनआरएनएलाई 'एस म्यान' चाहिएको हो कि सक्रिय क्षेत्रीय समिति ?
जापानको फुकुओकामा भर्खरै सम्पन्न नेपाल आइडल लाइभ कन्सर्ट दर्शकहरुको फितलो उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । किन यस्तो भयो भन्ने बारे एकपटक सोच्न आवश्यक छ । एनआरएनए जापानले यसभन्दा अघि नै कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरेता पनि जापान सरकारले भिजा नदिएर रोकिनु परेको थियो । पुनः दोस्रोपटक क्युस्युबाट कलाकारहरु भिजा निकालेर कार्यक्रम गरियो ।
कार्यक्रमको प्रकृति हेर्दा नेपाली समाज जापानमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई मेट्नको लागि मात्र गरिएको धेरैको बुझाई छ । कतिपयले कार्यक्रममा ‘एस म्यान’को प्रगोग गरी आफ्नो छवि बनाउनको लागि मात्र त गरिएको होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
एनआरएनए क्षेत्रीय समितिहरु केन्द्रको अधिनमा हुनुपर्छ तर, आफ्नो अस्तित्व नै मेटिने गरी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । एनआरएनए क्युसुको नयाँ कार्यसमिति १७-१९ सुरुदेखि आज झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्दैगर्दा केवल एउटा कार्यक्रम गरेको छ । त्यसमा पनि क्युस्यु कार्यसमितिको नभई एनआरएनए जापानको आयोजना भन्दा कार्यसमितिको सदस्यहरुलाई अर्थात् क्युसुबासी नेपालीहरुलाई असहज त भएन ? यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ भन्ने लगेको छ ।
कहिलेकाँही लाग्छ, एनआरएनएलाई ‘एस म्यान’ नभई सक्रिय कार्यसमितिको आवश्यक छ । ‘एस म्यान’ प्रवृत्तिले जहिले पनि केही व्यक्तिहरुको हित र स्वार्थलाई ध्यान दिन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित हुन्छ । समग्र टिमले के चाहिरहेको छ, संस्थाको उद्देश्य के छ, सदस्यहरुको चाहना के छ ? जस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या र विवाद जन्मन्छ । संस्थामा सामूहिक निर्णय प्रणाली नहुँदा गतिविधिको सबैले स्वामित्व लिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
आपतकालीन राहत कोष जापानमा कार्यरत प्रवासी नेपालीलाई भवितव्य पर्दा वा अप्ठेरोमा सघाउने पवित्र भावना र चाहनाबाट जन्मिएको कोष हो । यो अभियानका संस्थापक हस्तीहरुले राहत कोषको स्थापना मात्र गरेनन्, उक्त कोषमा रकम जम्मा पनि गरे । यो प्रवासी नेपालीहरुले गाँस कटाएर जम्मा गरेको रकम हो ।
लाइभ कन्सर्टको आयोजना गर्दा यही आपतकालीन राहतकोष वृद्धि भन्दै प्रचार गरियो । भर्खरै सम्पन्न कार्यक्रमलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने बचत गरेको रकम खर्चिनु पर्ने स्थिति छ । कार्यक्रमको उद्देश्य आपतकालीन राहत कोष वृद्धि भन्ने अनि नचाहिँदो खर्च र व्यक्तिवाद हावी हुनाले कोषको उद्देश्य र आकारमाथि धक्का पुगेको छ ।
कलाकारलाई कार्क्रमको लागि ल्याइएको हो । जापानमा आपतकालीन राहत कोषको नाममा उठाइएको रकमले घुमाउन होइन । गत शुक्रबार क्युस्युमा कन्सर्ट सम्पन्न भयो । अब दोस्रो नेपाल फेस्टिवल जापान आउँदो शनिबार र आइतबार छ । त्यतिन्जेल कसले पाल्ने कलाकारहरुलाई ? यदि आपतकालीन राहत कोषको लागि नै यो कार्यक्रम हो भने किन यति लामो समय कलाकार पालेर खर्च बढाउने ? त्यो कलाकारहरुको खर्च कसले बेहोर्ने ? वास्तविकता के हो ?
सामाजिक संस्थामा जब कुनै व्यक्तिको हठ र कसैको आशिर्वाद हावी हुन्छ तब नतिजा नकारात्मक आउँछ ।
क्युस्युको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने हालको कार्यसमितिलाई सक्रिय र विश्वास दिलाउन नसक्नु अनि पुर्व कार्यसमितिलाई बेवास्ता गर्नु र आफु भन्दा अग्रजको विचारलाई बेवास्तासँगै मपाईत्वको भावना हुनु यसको मुख्य कारण हो । संस्थाहरु सार्वजनिक हितका लागि जन्मिन्छन् । जतिबेलासम्म संस्थामा सामूहिकता हुन्छ र सार्वजनिक हितको रक्षाप्रति संस्थाका नेतृत्व प्रतिवद्ध हुन्छन्, तबसम्म नतिजा सुखद नै हुन्छ । तर, जब संस्थागत हित व्यक्तिगत हित रक्षाको लागि दुरुपयोग हुन्छ, तब संस्थाहरुमा समस्या देखापर्छन् ।
यसर्थ, संस्थाहरुलाई एस म्यानहरुको झुण्डमा होइन, सार्वजनिक हित रक्षा गर्ने प्रणालीको रुपमा विकास गरौं । हरेक सदस्यहरुको हित, रुचि र चाहनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्णय गरौं ।